केकीको ठेकीमा दही, कसले खाला खोई ? « Ramailo छ
केकीको ठेकीमा दही, कसले खाला खोई ?
समय : 8:55 am
फागुन २५ गतेलाई प्रदर्शन मिति तोकिएको फिल्म ‘हुर्रे’ को शिर्ष गीत रिलिज गरिएको छ । राजनराज सिवाकोटीको स्वर तथा संगीत रहेको गीतमा मिलन अमात्यले सिवाकोटीलाई स्वरमा साथ दिएकी छन् । शब्द राजेन्द्र थापाको छ। केकी अधिकारी, राजाराम पौडेल र अंकित खड्काको नृत्य रहेको गीतमा विक्रम स्वाँरको कोरियोग्राफी छ । भिडियो हेर्नुस् :
यम थापाको लेखन तथा निर्देशन रहेको ‘हुर्रे’ मा केकी, राजाराम र अंकितसँगै अनुप विक्रम शाही , विजय वराल, संगीता नापित लगायतको अभिनय पनि रहेको छ । द याक्खा इन्टरटेनमन्टको प्रस्तुती रहेको फिल्मका निर्माता दावा शेर्पा ‘शेट्टी’ हुन् । सोनाम लामा ‘ब्लोन’ र छिरिङ्ग दोर्जे लामाको लगानी रहेको फिल्ममा सह निर्माताको रुपमा अरुण सेदाई रहेका छन् ।